घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू डच फुटबल खेलाडीहरू जोशुआ Zirkzee बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो जोशुआ Zirkzee जीवनी तपाईंलाई उनको बचपन कहानी, प्रारम्भिक जीवन, परिवार, आमा बुबा, प्रेमिका / पत्नी हुनु, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थका बारे तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दहरूमा, हामी तपाईंलाई अगाडिको जीवन यात्राको साथ प्रस्तुत गर्दछौं। हामी उनको शुरुवाती दिनहरुदेखि सुरु हुन्छौ जब उनी प्रख्यात भए।
तपाईको आत्मकथा भूखलाई बढावा दिन वयस्क ग्यालरीमा उनको बाल्यकाल हेरौं - जोशुआ जिरकी बियोको एक सारांश।
जोशुआ जिरकीको जीवन कथा।
हो, सबैलाई थाहा छ ऊ सम्भावित रूपमा एक प्रतिस्पर्धी हो रोबर्ट Lewandowski को उत्तराधिकारीको गोल स्कोरिंग सिंहासन। यद्यपि धेरै प्रशंसकहरूलाई जोशुआ जिरकीको ईतिहास थाहा छैन, जुन एकदम चाखलाग्दो छ। धेरै विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जोशुआ जिरकजी बाल्यकाल कहानी:
सानो जोशले सधैं बाल्यावस्थाको दिनदेखि नै फुटबललाई प्रेम गर्थ्यो।
सुरु गरेर, उहाँ उपनाम जोश राख्नुहुन्छ। जोशुआ ओरोबोसा जीरक्जी मे २००१ को २२ औं दिनमा उसको नेदरल्याण्ड्सका बुबा, रिमको जिरक्जी र नाइजेरियाकी आमा नेदरल्याण्ड्सको स्किडाम शहरमा जन्म भएको थियो। उहाँ यस संसारमा आफ्ना बाबुआमाको मिलनबाट जन्मेका दुई छोरा मध्ये जेठोको रूपमा आउनुभयो।
जोशुआ Zirkzee बढ्दो दिन:
जोशको बचपन जोर्डन, उनको कान्छो भाइको साथ धेरै रोचक अभियान भरिएको थियो। At मा, उनको परिवार रोटरडममा सरे, जहाँ खेल समाजको मापदण्ड हो।
जस्तै मार्कस राशफोर्ड, सानो जोश जहाँ उनी पनि बैठक कोठामा खेलेका बल जताततै थिए। नियमित रूपमा, उनका बुबाआमाले आफ्नो फुटबल गतिविधिहरूको कारण उनीहरूको घरको दागहरू भित्ते बनाउनु पर्छ। धेरै अवसरहरूमा, Zirkzee खाने कोठा को वरिपरि हिंडिरहेको बेला उनकी आमा पास गर्न कोशिस गरे।
जोशुआ Zirkzee परिवार मूल:
आफ्नो पुर्खामा बढ्दै, फुटबलर एक डच नागरिक हो जससँग नाइजेरिया रुट्सको ट्रेस पनि छ। उनको मातृ परिवारको मूलबाट हेर्दा, प्रतिभाशाली अगाडि इसोकोसँग जोडिएको छ जस्तो देखिन्छ जुन डेल्टा राज्य, नाइजेरियाको एक क्षेत्र हो।
अधिकांश अफ्रिकी राष्ट्रहरू युवा प्रतिभालाई उनीहरूको एकको रूपमा पहिचान गर्नमा गर्व गर्छन्। सायद उनले अझै दक्षिणी नाइजेरियामा आफ्नो मातृ गृहनगर भ्रमण गरेका छैनन्।
अर्कोतर्फ, Zirkzee पैतृक जरा Schiedam, जो दक्षिण हल्याण्ड मा एक ऐतिहासिक नगरपालिका हो को लागी पत्ता लगाइएको छ। स्पष्ट रूपमा, उनको जन्मस्थान जसमा अनुमानित population 76,000,००० जनसंख्या छ वरपर क्रुज गर्न केहि धेरै राम्रा नहरहरू पनि छन्। मोरेसो, यो विश्वमा सब भन्दा अग्लो ऐतिहासिक पवन चक्कीहरू भएको कारणले परिचित छ।
जोशुआ Zirkzee परिवार पृष्ठभूमि:
उसको बाल्यकालदेखि नै, उनका आमा-बुबाले सँधै उसलाई र उसको भाइलाई आवश्यक पर्ने सबै कुरा प्रदान गरेका थिए।
साथै, उनको परिवार मध्यमवर्गीय परिवारको रूपमा फस्टायो जुन पैसाको अभावको बारेमा धेरै चिन्ता लिनुपर्दैन। तिनीहरूको आर्थिक स्थितिको साथ, रिमको र तिनकी श्रीमतीले यहोशूलाई फुटबल एकेडेमीमा पठाउन सक्थे।
कसरी जोशुआ Zirkzee फुटबल यात्रा शुरू भयो:
हामीले पहिले नै भनेझैं, आइकोनिक अगाडि बढ्दै गर्दा खेलसँग सम्बन्धित धेरै अभियानको अनुभव भयो। Zirkzee आफ्नो जन्म प्रतिभा उपयोग सुनिश्चित गर्न, आफ्नो आमा बुबा उनलाई VV हेकलिनजेन एकेडेमीमा भर्ना गर्न जब उहाँ he वर्ष थियो।
त्यस पछाडि फर्वार्डले धेरै सम्भावित क्षमता देखायो र शाब्दिक रूपमा उसका साथीहरू मिलेर आउट भए। उहाँ छिटो सिक्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले कहिल्यै पनि आफ्ना प्रशिक्षकहरूको निर्देशनहरूको पालना गर्न संघर्ष गर्नु भएन।
यद्यपि उनका बुबा घाँस जड एकेडेमीसँग सन्तुष्ट भएनन् र अधिक प्रतिस्पर्धी संस्थानको खोजी गरे। यसैकारण, २०१० मा रिमको जिरक्जीले उनका पहिलो छोरा स्पार्टान २०२० मा सम्मिलित गरेकी थिइन।
उसको ब्रुडि ground मैदानबाटै, आक्रमणकारी सधैं जहिले पनि आफ्ना जोडीहरूको बीचमा खडा हुन्छ।
जोशुआ Zirkzee प्रारम्भिक क्यारियर जीवन:
अर्को तीन बर्षको लागि, आक्रमणकर्ताले आफ्नो भतिजा (नेल्सन अमाडिन) सँग काम गरे दुबै अनुभव र कार्यनीतिमा सुधार गर्न।
उसको युवा क्यारियरका बाँकी दिनहरू उनी स्पार्टन'२०२० देखि एडीओ डेन हागमा सर्दै आएका थिए। त्यहाँ उनले १'s बर्षको उमेरको बावजुद क्लबको U-१ for को लागि चित्रण गरे।
२०१O को रूपमा सेट अप गरिएको एडीओ डेन हाग युवामा सबैभन्दा प्रभावशाली बच्चाहरू मध्ये एक भेट्नुहोस्।
उनको प्रारम्भिक विकासको बारेमा एउटा कुरा यो हो कि जीरक्जी प्रायः आफ्नो टीमका साथीहरू भन्दा बलियो र अग्लो थिए। यस उपलब्धीले उसका धेरै साथीहरूलाई आलंकारिक रूपमा उसको खोजी गर्‍यो। उनका केहि ब्यवस्थापकहरूले यो तथ्यलाई प्रमाणित गरे कि उनी 95%% सुधारको लागि जिम्मेवार छन्।
जोशुआ Zirkzee बायो - फेम टु रोड:
जे होस्, फेयुनार्डबाट स्काउट्सले २०१ talent मा आफ्नो क्लबमा युवा प्रतिभामा हस्ताक्षर गर्न गुमाएनन्। अर्को वर्ष बायरन म्यूनिखको उनको साथमा, उनले बुन्डेस्लिगामा पहिलो बलको सम्पर्कको साथ उत्साहको बृद्धि गरे.
फ्यानहरूले मद्दत गर्न सकेनन् तर उनले बावरियनहरूसँग सिर्जना गरेको उत्साहमा बाँच्न।
के तपाईंलाई थाहा छ?… स्ट्राइकरको यथार्थता तुरून्त बायरन म्युनिकमा आइपुगेपछि महसुस भयो किनकि उनले आरक्षित टोलीका लागि डेब्यूमा ह्याट्रिक गरे। यस उपलब्धिले फुटबल सुपरस्टारहरू जस्ता प्रशंसाको आकर्षित गर्‍यो Jerome Boateng.
जोशुआ Zirkzee बायो - ख्याति उठ्नुहोस्:
को शस्त्रागार मा उनको प्रभाव संग हान्सी फ्लिक, नाइजेरियाले सुनको केटोलाई उनीहरूको टोलीमा खोल्न खोज्यो। यद्यपि जोनले गेर्नोट रोहरले बनाएको हरेक चाल छोडिदिए जस्तो कि उसले आफ्नो जन्मभूमिको लागि चित्रित गरेको थियो।
कुनै श doubts्का छैन, बभेरियनहरु संग उसको क्यारियर जीवन धेरै नै ट्रफीहरु जितेको कारण धेरै नै उत्सवहरुको श्रृ with्खलाले भरिएको थियो।
बावरियनहरूसँग उनका क्षणहरू कहिल्यै पट्टिलो थिएनन्। अवश्य पनि, उनी क्लबसँग धेरै ट्राफीहरू र पुरस्कार जित्ने अवसर पाएका थिए।
मैले यो बायो संकलन गर्दा, Zirkzee बुन्देस्लिगा मा सबैभन्दा युवा डच गोल स्कोरर हो। महाद्वीपीय ट्रेबलको साथ आफ्नो वरिष्ठ डेब्यू वर्ष पूरा गरेपछि, बायरन म्युनिकले जनवरी २०२१ मा उनलाई पर्मामा edण दिए। यस सम्झौताले किन्नुको विकल्प पनि समावेश गर्दछ। बाँकी उनीहरू भन्छन् कि ईतिहास हो।
जोशुआ Zirkzee प्रेमिका / पत्नी हुन:
त्यहाँ कुनै तरिका छैन जोश जस्तो युवा र तातो रगत खेलाडीसँग मुठीभर महिला प्रशंसकहरू छैनन्। आफ्नो अस्तित्वको यस चरणमा, यो स्वाभाविक छ कि उसले डेट गर्न चाहेको छनौट गर्ने निर्णय आफ्नो जीवनको सबैभन्दा संवेदनशील विकल्प हुन्छ।
यस नोटमा, Zirkzee सक्रिय रूपमा आफ्नो सुन्दर खैरो-छालाको प्रेमिका डेटि। गर्दै छ। उनको नाम सेलिना केर हो, र उनी प्रसिद्ध इन्स्टाग्राम मोडेल हुन्। अवश्य पनि, उसलाई मिडियामा आफ्नो प्रेमिका फ्ल्यान्ट गर्न आफ्नो बुबा वा आमाको अनुमति चाहिदैन।
एक आगामी सुपरस्टार भएता पनि, Zirkzee आफूलाई एक राम्रो प्रेमिका फेला छ।
जोशुआ Zirkzee व्यक्तिगत जीवन:
के डच सुनौलो केटा बाक्लो बनाउँछ?… पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, त्यो मिथुन राशि को व्यक्तित्व को एक व्यक्तिको सही परिभाषा हो। हामीले हेरेका कुराबाट, Zirkzee सहजै शब्दहरू र चरित्रहरू यति सोचविचारको साथ मिलाउन सक्छ कि त्यसले आफ्ना साथीहरूलाई प्रभाव पार्छ।
निस्सन्देह, ऊ कि त धेरै मादक पनि होइन। तर अगाडि उसले आफ्नो कार्बोनेटेड पेयलाई तल झार्न मन पराउँछ भने ऊ आफ्ना साथीहरूसँग राम्रो समयको आनन्द लिन्छ। पक्कै पनि, उहाँ आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइलाई प्राथमिकतामा लिनुहुन्छ। तसर्थ, ऊ धूम्रपान गर्दैन।
आफ्ना साथीहरूसँग समय बिताउनु भनेको उहाँलाई आनन्द दिने थुप्रै चीजमध्ये एक हो।
आइकनिक एथलीट धनी छ, यसमा कुनै शंका छैन। लगभग २० लाख डलरको उसको २०२१ नेट वर्थसँग, जीरक्जीले विलासी जीवनशैलीमा कम चासो देखाएकी छिन्।
धेरै जसो अवसरहरूमा, युवा तर धनी खेलाडीले सडकको वरिपरि आफ्नो पोर्टेबल साइकल चढ्न रुचाउँछन्।
ऊ धेरै सरल जीवनशैली नभएको साधारण जीवनशैली बिताउँछ। तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि उहाँ एक पटक मठमा हुनुहुन्थ्यो।
जोशुआ जिरकी परिवार:
यो घर वरिपरि छ कि केहि सब भन्दा राम्रो सद्गुण र बन्धनहरू सिर्जना, सुदृढ र रखरखाव गरिन्छ।
पक्कै पनि, Zirkzee आफ्नो परिवार संग धेरै यादगार र blissful क्षणहरूको आनन्द उठाएको छ। तसर्थ, हामी तपाईंलाई उसको बुबा, आमा, भाईबहिनी र आफन्तहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दछौं।
जोशुआ जिरक्जीको बुबाको बारेमा:
स्ट्राइकरको क्यारियर जीवनमा प्रभाव पार्ने नम्बर एक व्यक्ति रिमको Zirkzee हो, उसको बुवा। चाखलाग्दो कुरा के छ भने जोशका बुबाले आफ्नो फुटबलको प्रगति माथि नजर राखेका थिए जबसम्म उनले शीर्ष इक्लेनसमा सफलता रेकर्ड गर्दैनन्।
रेकर्डहरूको लागि, रिमकोले खुलासा गरे कि उनले आफ्नो छोरामा कुनै क्यारियरको निर्णय लिएन। उनले सबै जेर्कजीलाई सहयोग गरे, हरेक बुबाले गरे।
जोशुआ जिरज्जीकी आमाको बारेमा:
हो, उसकी आमाको कोमल कोमलताले बनेको छ जहाँ उसले सान्त्वना पाउँदछ हरेक पटक परिस्थिति कष्टकर बन्छ। उनी नाइजेरियाली छिन् र उनको कालो छालाले उनको अफ्रिकी पुर्खा बनाउँदछ।
जोशुआ जिरकीको आमालाई भेट्नुहोस्। कुनै श doubts्का छैन, उसले आफ्नो नाइजेरियाली आमाको कालो रूप प्राप्त गरे।
पक्कै पनि, उनको जीवन सजिलो नोटबाट सुरु भएन, तैपनि उहाँ आफ्ना केटाहरूको लागि जीवित उदाहरण हुनुहुन्थ्यो। कुनै श doubts्का छैन, हँसिलो डच प्रतिभा सधैं उनलाई सिकाएको जीवन पाठ को लागी कृतज्ञ हुनेछ।
जोशुआ जिरज्जीका भाई बहिनीहरूको बारेमा:
सायद तपाईंलाई थाहा थिएन कि जोशको भाई (जोर्डन जीर्क्जी) पनि एक फुटबल खेलाडी हो। ऊ आक्रमणकारीको लागि सँधै राम्रो सहयोगी भएको थियो।
चाखलाग्दो जोर्डन जो २०० born मा जन्मेका थिए उही युवा टीम - फिनोर्ड - मा पनि देखा पर्दछ जुन उनको भाइले गरे।
उसको जेठो भाईले जस्तै नाइजेरियाको फुटबल महासंघ आगामी प्रतिभाका लागि नेदरल्याण्डको बिरूद्ध जुल्नेछ।
जोर्डन जिरकीको भाई, जोर्डनलाई भेट्नुहोस्। वास्तवमा, उहाँ आफ्नो जोश भन्दा बढी सुन्दर हुनुहुन्छ (तपाईं वास्तवमै त्यस बारे बहस गर्न सक्नुहुन्छ)।
जोशुआ जिरज्जीका आफन्तहरूका बारे:
यो भनाइ भइरहँदा, हजुरआमा धेरै फ्रोस्टिंगका साथ आमाहरू हुन्। तसर्थ, तिनीहरूले सँधै तपाईंलाई महसुस गराउँदछन् कि तिनीहरू दिनभरि तपाईं मात्रै पर्खिरहेका छन्। त्यसकारण जीरक्जीले आफ्नी आमाको हजुरआमासँग अतुलनीय बन्धन बाँकी छ।
उसको परिवार सकारात्मक उर्जाले भरिएको छ। हेर्नुहोस् कसरी उहाँ आफ्नो हजुरआमा संग एक आनन्दमय क्षण आनंद।
चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उसको हजुरआमाले आफ्नो नाति नेदरल्याण्ड्सका लागि खेलने कुनै अवसर गुमाइनन्। उसको परिवारका सदस्यहरु मध्ये उसको हजुरबुबा हजुरआमा र काका र काकी का बारे मा सान्दर्भिक जानकारी छैन।
जोशुआ Zirkzee अनटोल्ड तथ्यहरू:
आक्रमणकारीको जीवनी समेट्न, यहाँ उसको बारेमा केहि तथ्यहरू छन् जुन तपाईंलाई उसको जीवन कहानीको पूर्ण ज्ञान प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
बायरन म्यूनिखमा उसको आम्दानीको हाम्रो विश्लेषणले देखाउँछ कि जीरक्जीले हरेक वर्ष € 830,000०,००० को अनुमानित रकम प्राप्त गर्दछ। तपाईंलाई उसको तलबको स्पष्ट ब्रेकडाउन बुझ्न मद्दतको लागि, हामीले तल यस तालिका तैयार गरेका छौं।
प्रति वर्ष € 830,000
प्रति महिना € 69,167
प्रति हप्ता € 15,937
प्रति दिन € 2,277
प्रति घण्टा € 95
प्रति मिनेट € 1.6
प्रति सेकेन्ड € 0.03
तपाईं स्तब्ध हुन सक्नुहुनेछ यदि हामी तपाईंलाई भन्छौं कि एक औसत डचले साढे years वर्ष काम गर्नुपर्नेछ जोशले एक महिनामा प्राप्त गरेको कमाई गर्न।
हामीले रणनीतिक रूपमा उसको तलबको विश्लेषणलाई घडीको टिकटको रूपमा राख्यौं। तपाईं यहाँ आउनुभएपछि Zirkzee ले कति कमायो भनेर आफैंलाई खोज्नुहोस्।
जब देखि तपाइँ हेर्न शुरू गर्नुभयो जोशुआ Zirkzee को बायो, यो उसले कमाएको छ।
खेलकुदको संसारमा, जहाँ शाईले खेल खेल्ने थुप्रै खेलाडीहरूका लागि जीवनशैली बन्न जान्छ, जिरक्जीले २१ औं शताब्दीको प्रवृत्तिमा आँखा चिम्लेको छ। सायद धेरै कान्छो हुनु एउटा कारण हो जुन उसले अहिले सम्म मनपराउनेहरूलाई अनुसरण गर्न सकेको छैन मेम्फिस डिप्टी ट्याक्सीमा ईन्कि .्ग गर्दा उसको शरीरमा।
तथ्य # १: गरीब फीफा तथ्या :्क:
चीजहरूको हेराईबाट, स्ट्राइकरको रेटिंग्स एक ठट्टा जस्तो देखिन्छ। स्पष्ट रूपमा, बायर्न म्यूनिखमा उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले २०२१ फिफा विश्लेषणमा उनका धेरैजसो तथ्या .्कहरू वास्तवमा माथि उठाइएको छैन।
लगभग उस्तै सम्भावित रेटिंग्स भएसम्म Perr Schuurs, जोससँग अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ आफ्ना गुणहरूले आफ्ना तथ्या over्कहरूमा हरियो रंग प्रदर्शन गर्न सुरू गर्नु अघि।
उसले आफ्नो सम्पूर्ण फिफा तथ्या .्कहरू बढाउन कडा मेहनत गर्नुपर्छ।
अन्तमा, जोशुआले आफ्नो क्यारियर जीवनमा धेरै हासिल गरेका छन् किनकि उनका बुबाले फुटबलको लागि उनको उत्कटतालाई समर्थन गरे। मोरेसो, उनकी आमाको सल्लाह र भाइको साथीले उनलाई चुनौतीपूर्ण क्षणहरूमा हार नमान्ने जोस दिए। यो उनको परिवारलाई सबै धन्यवाद छ कि आज संसारले उनको मनोरन्जनकारी गेमप्लेताको आनन्द लिन पाएको छ।
हामीसँग अफ्रो-डच सुनौलो केटाको जीवनीमा रहनुभएकोमा धन्यवाद। Lifebogger मा, हामी सधैं तपाईंको मनपर्ने फुटबलरको जीवन कहानी डेलिभर गर्दा सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं।
यदि तपाइँ हाम्रो जेशुआ Zirkzee बायो मा राम्रो लाग्दैन कि केहि भेटियो भने, कृपया हामीलाई टिप्पणी सेक्सन मा बताउनुहोस्। अगाडिको मेमोअरको छोटो सारांशको लागि, तल हाम्रो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: जोशुआ ओरोबोसा जीरक्जी
जन्मस्थान: स्किडाम, नेदरल्याण्ड्स
पिता: रिमको Zirkzee
Siblings: जोर्डन Zirkzee
प्रेमिका / पत्नी हुन: सेलिना केर
नेट मूल्य: Million २ लाख (२०२१)
वार्षिक वेतन: € 830,000
उचाइ: 1.93 मीटर (6 फुट4मा)